merolagani - भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट बिए-टु पुष्टि, कतिकाे भयानक छ ?
Jan 24, 2022 12:44 PM Merolagani
भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट बिए-टु ( BA-2) पाइएको छ । विश्वभरमा हाल ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण धमाधम संक्रमण बढिरहेको छ । तर यसैबीच फेरि कोरोनाको अर्को भेरियन्टको खतरा देखिएकाे छ । यस भेरियन्टलाई बिए-टुको नाम दिइएको छ । भारतको मध्य प्रदेशस्थित इंदौरमा ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट बिए-टु पुष्टि भएको हाे ।
सो शहरमा १६ जनामा उक्त भेरियन्ट पुष्टि भएको हो । जसमध्ये ६ जना बालबालिका रहेका छन् । भारतभरबाट ५३० नमुना परीक्षणकालागि पठाइएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बेलायत, अष्ट्रेलिया र डेनमार्कमा पनि यस्तो संक्रमण पाइएको छ । यो भेरियन्ट ओमिक्रोन जस्तै छिट्टै फैलिन्छ । कोरोनाको यो नयाँ भेरियन्टको पहिचान हुन नसकेमा यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । थप चिन्ताको विषय बन्नुको कारण यो परीक्षण किटमा पनि देखिन कठिन छ ।
जसकारण बिए टुलाई स्टिल्थ अर्थात् लुकेको भर्जन भनिएको छ । बेलायत, स्विडेन र सिंगापुरमा पनि हरेक देशबाट १०० नमुना परीक्षणकालागि पठाइएको छ ।
स्टिल्थ भर्जन कहाँ र कहिले भेटियो?
हालसम्म यो भेरियन्टको पहिलो संक्रमण कहाँ पाइयो भन्ने स्पष्ट छैन । बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार बेलायतमा पहिलो पटक २०२१ काे डिसेम्बर ६ मा पत्ता लगाइएको थियो । सो देशमा यो भेरियन्टको ४२६ केस पुष्टि भइसकेको छ । यो भेरियन्ट अन्य भेरियन्टभन्दा तिव्रताका साथ फैलने गर्दछ । बेलायतमा यसलाई अन्डर इन्भेष्टिगेशन श्रेणीमा रााखिएको छ ।
बिए टु भेरियनटको लक्षण के हो ?
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट बिए-टुको लक्षण ओमिक्रोनको जस्तै छ । ओमिक्रोन पुष्टि गर्नका लागि जुन जेनेटिक स्रोत खोजिन्छ, त्यो बिए-टु मा हराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जेनेटिक सिक्वेन्सिंगका माध्यमबाट यो भेरियन्टको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
कति देशहरुमा पुगेको छ नयाँ भेरियन्ट ?
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट पहिचान गर्नका लागि गत वर्ष नोभेम्बर १७ देखि नै ''ग्लोबल इनिसियटिभ अन शेयरिंंग अल इन्फ्लुएन्जा'' मा माध्यमबाट तथ्यांक जुटाइएको छ । हालसम्म करिब ४० देशहरुले आफ्नो तथ्यांक पठाएका छन् ।
कतिको भयानक छ बिए - टु भेरियन्ट ?
कोरोनाका सबै भेरियन्टहरुमा अनुसन्धान गरिरहेका युुनिभर्सिटी अफ जेनेभाका निर्देशक फ्लाहल्टका अनुसार बिए-टुसँग डराउने भन्दा पनि सर्तक हुन आवश्यक छ । यस नयाँ भेरियन्ट ओमिक्राेन जस्तै संक्रामक रहेको छ । यद्धपी अहिलेसम्म यो कतिको भयानक छ भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन ।